Beijing yekufambisa uye yekushanya mari yakadzika 53% muna 2020
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Beijing yekufambisa uye yekushanya mari yakadzika 53% muna 2020
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Guta reBeijing rakaona simba rekufambisa uye rekushanya rakamiswa mu2020
Beijing mari kubva mukushanya yakadonha inodarika madhora makumi mashanu emadhora mushure memakore ekukura
COVID-19 yakarova China kutanga uye yakakonzera kukanganiswa kukuru muH1 ye2020
Tourism muChina yakaratidza kupora zvachose mukati memakore mashanu
Indasitiri yezvekushanyirwa yakarohwa zvakaipisisa nedenda re COVID-19 uye guta reBeijing rakaona kukurumidza kwemaindasitiri kwakamiswa muna 2020. Beijing yakange yave nzvimbo inowanzozivikanwa yekushanya nzvimbo isati yavapo nedenda nemari kubva mukushanya kwakakura kwakanyorwa pa $ 5.16B muna 2019 Sekureva kwedata razvino, mari yese yeBeijing kubva mukushanya yakadzikira neinopfuura 53% muna 2020 nekurasikirwa kunoshamisa kwe ¥ 330 bhiriyoni kana $ 50 bhiriyoni.
China yakagara ichibva pamitemo yayo yekuzvitsaura uye yakagara ichikurudzira iyo mainland senzvimbo yekufambisa yevashanyi. Mari inowanikwa kubva kuChina chikamu chekushanya yakakura payakagwinya 13.8% CAGR kubva 2010-2019 kusvika 5.7 880 trillion kana ingangoita $ 2019 bhiriyoni. Mu65.7, China yaive nyika yechina yakashanyirwa zvakanyanya nevashanyi vekunze vane XNUMX mamirioni anosvika egore.
Beijing ndeimwe yenzvimbo dzinotungamira dzekushanya kuChina uye guta racho rave kunakidzwa nekukura kwenzvimbo yekushanya kudzamara denda ra2020 rasvika. Kubva 2016-2019 Beijing yemari yekushanyirwa yakawana 5.53% CAGR, ichikwira kusvika pamutengo we ¥ 622.7 bhiriyoni muna 2019. Zvisinei, COVID-19 yakavhara miganhu kutenderera pasirese, ichikanganisa kufamba kwepasirese uye ichikanganisa simba rakavakwa neindasitiri yekushanya yeBeijing. Mari yaBeijing kubva mukushanya yakadonha pamusoro pe53% muna 2020 kusvika pamusoro pe ¥ 291.
Beijing yakarasikirwa nekurasikirwa kunoshamisa mumari kunyanya mukushanyirwa kuri mukati umo mari yakadonha kubva pamadhora 5.16 bhiriyoni muna 2019 kusvika kumadhora mazana mana mazana masere nemakumi masere muna 480.
China yakanzwa mhedzisiro yeCOVID-19 nyika zhinji dzisati dzaita. Muenzaniso wakajeka weizvi uri mukudonha kwekubhuka kwevhiki kweAirbnb kubva panguva iri pakati paNdira 5 kusvika Kurume 7 apo iyo Coronavirus yaingova nhau kune dzimwe nyika dzezvaiitika munzvimbo dzakasiyana dzeChina. Beijing yakasangana inodonha 96% kudonha kwevhiki nevhiki AirBnB bookings zvichienzaniswa ne46% chete muSeoul uye 29% muTokyo munguva ino yenguva.
Huwandu hwevashanyi vekumba hunofungidzirwa kunge hwadzikira nekuwanda se62% muhafu yekutanga ye2020 zvichienzaniswa negore rapfuura nemari inoburitswa neanosvika 77%. Pakupera kwegore, China yakanga yaona kuderera kwe43% kune vashanyi vekumba uye 52% kudonha kwemari kubva mukushanya kwemumba.
Mu2019, iyo yakakwana hupfumi mupiro wekushanya muChina wakafungidzirwa pamadhora 1.67 trillion. Izvi zvakadonha zvakanyanya kune ingangoita $ 745.5 bhiriyoni mu2020 - kuderera kweanopfuura 55% asi ichiri yakakura kwazvo muAsia uye yechipiri pakukura kwazvo mushure meUSA.
Nekudaro, fungidziro dzine huwandu hunodzosera kumusoro neanopfuura 40.5% muna 2021 kusvika $ 1.04 tiririyoni. Iyo nhamba inofungidzirwa kudarika pre-denda mazinga kekutanga muna 2023 apo mupiro wakakwana wezvehupfumi wekushanya unofungidzirwa kuve uri $ 1.75 tiririyoni.